बलिउडका कतिपय सेलिब्रिटीहरु नांगै सुत्न रुचाउँछन् । तपाईले पनि यस्ता बानी भएका सेलिब्रिटीबारे कमै सुन्नु भएको होला ? बलिउडमा पनि केही यस्ता सेलिब्रिटीहरु छन् जसलाई रातिमा नांगै नसुति निन्द्रै पर्दैन ।
१. जोन अब्राहम
जोन अब्राहम बलिउडका हट एण्ड बोल्ड लुकिङ स्टारको रुपमा परिचित छन् । उनको मुस्कानमै कहिल्यौ युवतीहरु आकर्षित हुने गर्छन् । यो सुन्दा ती युवतीहरुलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ कि जोन रातमा नांगै सुत्न रुचाउँछन् । जोनले एक अन्तर्वार्तामा आफु नांगै भएर सुन्त रुचाउने बताएका थिए ।
२. ज्याकलीन फर्नानडेज
फिल्म ‘डिसुम’ मा जोन अब्राहमसँगै काम गरेकी ज्याकलिन पनि यस विषयमा पछाडि छैनन् । उनले अनुषा दाडेकरसँग गरेको अन्तर्वार्तामा आफू रातमा नांगै सुत्न रुचाउँने कुरा बताएकी थिइन् ।
यी सेलिब्रिटी ट्यालेण्टकी खानी हुन् । पद्यालक्ष्मी मोडल, लेखक, अभिनेत्री, टीभी होस्टेज तथा निर्माता समेत हुन् । उनले आफ्ना साथीहरुसँग कुरा गर्ने क्रममा बेडमा नांगै रहन र सुत्न रुचाउने बताएकी थिइन् । उनी सहजरुपमा निदाउन यसो गर्ने गरेको बताएकी थिइन् ।
४. पुनम पाण्डे
भारतकी हट मोडल तथा एक्ट्रेस कुनै न कुनै तरिकाले मिडियामा चर्चामा आइनै रहन्छिन् । हालै पुनम पाण्डेको एक भिडियो भाइरल पनि भएको थियो । जसमा उनी एक युवतीसँग खेल खेल्दै गरेकी देखिन्थिइन् । पुनम पाण्डेले टिवइटरमा लेखेकी थिइन्, ‘नांगै भएर सुत्नुहोस्, कुनै दिन त तपाईको राजकुमार भेटाउनु हुनेछ ।’ उनी रातमा नांगै भएर सुत्ने अर्थ पनि उनको यो टिवइटबाट थाहा हुन्छ ।
राखीलाई नचिन्ने कमै होलान् । उनी अरुलाई टिप्पणी गरेर चर्चामा आउन चाहाने सेलिब्रिटीमा पनि गनिन्छिन् । एक अन्तर्वार्तामा र्यापिड फायर खेल्दै थिइन् उनले यसबारे खुलासा गरेकी थिइन् । उनलाई रातमा नांगै सुत्न मनपर्छ ।
बलिउडमा मात्र नभइ हलिउडका कतिपय सेलिब्रिटीहरु पनि नांगै सुत्न रुचाउँछन् ।